Banyere Anyị - Tianjin Liwei Iron & Steel Co., Ltd
PPGI eriri igwe
Gi eriri igwe
Gi n'elu ụlọ
Gi mpempe akwụkwọ
CRC mpempe akwụkwọ
Ese Al eriri igwe
AL mpempe akwụkwọ
AL eriri igwe
Tianjin liwei ígwè & ígwè co., Ltd e guzobere na 2002, na aha na Tianjin Airport Industry Park. The isi azụmahịa nke Liwei bụ na ubi nke n'ichepụta, nhazi na-ekesa nke ígwè na ngwaahịa. Ngwaahịa na-ekewa atọ akụkụ: ígwè efere, ígwè ọkpọkọ na ígwè rebar. Steel efere gụnyere oyi akpọrepu ígwè eriri igwe (CRC), na-ekpo ọkụ akpọrepu ígwè eriri igwe (HRC), galvanized ígwè eriri igwe (Gi) na prepainted galvanized ígwè eriri igwe (PPGI). Steel ọkpọkọ gụnyere ERW ọkpọkọ, nwa elu ọjà, galvanized ọjà, enweghị nkebi ọjà, alloy ọkpọkọ na na.
Anyị na-ekesa ígwè ngwaahịa ma anụ ụlọ na esenidụt ahịa. Na mpaghara ahịa, anyị bụ ndị gị n'ụlọnga ụlọ ọrụ nke nnukwu ígwè mills tinyere Baotou ígwè otu, Hebei ígwè otu, Tiantie ígwè otu. Ma kesaa karịrị 50,000 tọn CRC, gị na PPGI kwa afọ. Anyị obodo ahịa na-n'ebe nile anāchi achi na Northern China, na edebewo ogologo okwu imekọ ihe ọnụ na anyị.
Anyị ụlọ ọrụ imezu nnwapụta nke mbubata na mbupụ n'afọ nke 2008, na mbupụ azụmahịa na-eto eto ugbu a. The ngwaahịa katalọgụ n'ihi na mbupụ na-agụnye CRC, Gi, PPGI, Tinplate na ígwè ọkpọkọ. Ahịa si Eastern Europe, South America, Mideast na Africa guzosie ike na mụ na ogologo okwu azụmahịa mmekọrịta anyị. Anyị na-ekwe nkwa anyị na ndị ahịa nke kacha mma mma, nwee ezi uche price na ozugbo nnyefe.
"N'Eziokwu, iguzosi ike n'ihe, ùgwù na ntụkwasị obi" bụ anyị azụmahịa criterion. Anyị na-atụ anya kpọbata ndị kacha mma ngwaahịa na ọrụ anyị niile kpọrọ ahịa.
The mmeri-mmeri game n'etiti ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, ụlọ ọrụ na ndị ahịa bụ anyị na-agba ọsọ lekwasịrị anya. Anyị na-atụ na anyị nwere ike ime nkesa na ọdịmma nke dum otu mgbe ịga nke ọma nke azụmahịa.
2-2-1404, nke 2, Chuangxinliulu, Huayuan Hi-Tech Industrial Park, Tianjin, 300384, China